Ny Semalt dia manolotra 3 Google Analytics Filtres ampiasaina
Ao amin'ny Google Analytics, ireo sivana dia manome antsika ny fahafahana manova sy manova ny angon-drakitra ary manitsy ny votoatin'ny kaonty araka ny takian'ny tranonkala. Azonao ampiasaina ny sivana Google Analytics mba hampidirana na hanafoanana ny angona, ny famindrana rakitra avy amin'ny sehatra iray mankany amin'ny iray hafa mba ahafahana mifandray amin'ny fomba tsara kokoa ary manatanteraka ny fepetra takian'ny raharahanao.
Ny fomba hanomananao ny tatitra dia miankina amin'ny fomba fandalinana ny angona ao amin'ny kaontinao Google Analytics - olimp protein tozu. Noho ny fanampian'ny solosaina dia afaka manova, manitsy, na manova ny angona ianao. Noho izany, ny Google Analytics dia afaka mampihatra ny sivana avy amin'ny fombam-panetan-tsofina mankany amin'ny endrika mifangaro amin'ny tranonkalanao. Amin'izany fomba izany dia lasa mora kokoa sy mora ny fanitsiana ny angon-drakitra, ary ny angon-drakitra voasivana dia manome anao ny tatitra marina momba ny fifamoivoizana hita ao amin'ny tranokalanao.
Oliver King, mpitantana ny Success Success of Semalt , dia mamelabelatra ireo karazan-drindrina lehibe telo izay ampiasain'ireo webmasters rehetra ao amin'ny kaonty Google Analytics: filalaovana spambot, fanakanana adiresy IP ary fanerena ny loharanom-pandrefesana na pejy ho ambany.
Ireo solosaina spambot dia mora ampiasaina ary manome safidy maro hifidy. Azonao atao ny manitsy ny solon'izy ireo amin'ny safidy View Settings ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Noho izany dia tokony hiditra ao anaty tabilao ianao ary hijery ny safidy Bot Filters..Kitiho ity safidy ity ary ampio izy io, arahin'ny fanakatonana ny varavarankely. Amin'ny alalan'ity safidy ity, dia mora ho an'ny olona ny manitsy ny lisitry ny spider sy ny bots amin'ny kaonty Google Analytics. Ampifanaraho amin'ny pejy maromaro araka izay tratra ny sivana mba hahazoana vokatra tadiavina.
2. Hanafoana ny adiresy IP rehetra
Ny zavatra faharoa tokony hijeranao dia manafoana ny adiresy IP ao anatiny. Noho izany, tokony hanokatra ny kaonty Google Analytics ianao ary mandehana any amin'ny sehatry ny Admin. Ity dia hahita ny safidin'ny View Settings, izay tsy maintsy misafidy ny safidy Filter mba hamoronana filalaovana maro. Tohizo hatrany izany mandrapahatonga anao hanana drafitra ampy ho an'ny tranonkalanao. Alohan'ny hanombohanao manamboatra solosaina, dia tokony ho azonao antoka fa hampihatra ireo filtre efa misy ianao raha misy izany. Ny dingana manaraka dia ny hanome anarana manokana amin'ireo sivana rehetra, ary mifidiana eo amin'ny filaharena efa voafaritra sy voafaritra. Ny sivana efa voafaritra dia modely ho an'ny filalaovana ampiasaina matetika, raha ny sivana ampiasaina dia fomba iray ahafahana mampifanaraka ny filaharanao amin'ny toe-javatra rehetra. Rehefa noforonina ny isan'ireo filaharana marobe, ny dingana farany dia ny hanamarina azy ireo. Ny Google Analytics dia tsy manome vahaolana amin'ny fanamarinana ny sivana, noho izany dia mila manao izany ianao amin'ny safidy hafa.
3. Ampirisihina ny URL hanoratra
Azo atao ny fanerena ny URL mba hampihenana ny vokatra tsara kokoa. Azonao ampiasaina ny sivana mba hanadiovana ny angona. Ohatra, raha asehon'ny tranonkalanao maromaro ny pejin-tranonkala ary tsy nanao SEO ianao, dia mety ho hita ao ny spam referendum. Amin'ny toe-javatra toy izany dia tokony hanana pejy miaraka amin'ny URL ambany ambany ianao fa tsy ny URL ambony ambany. Raha vao novainao ny lanjany ho an'ny vola madinika, dia aza hadino ny manamarina ny fanamarinana azy alohan'ny hanakatonana ny varavarankely.